तीन कारणले उच्च जोखिममा छन् कोरोना संक्रमित ट्रम्प :: Setopati
तीन कारणले उच्च जोखिममा छन् कोरोना संक्रमित ट्रम्प
द न्यूयोर्क टाइम्स असोज १८
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। तस्बिर: न्यूयोर्क टाइम्स
सत्तरी वर्ष उमेर नाघेका धेरै मानिसलाई जस्तै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पनि मुटुको सामान्य समस्या छ। हृदयघात नहोस् भनेर उनले आफ्नो कोलेस्ट्रोलप्रति सावधानी अपनाउनुका साथै नियमित ओखती पनि खाइरहनुपर्छ।
गत जुन महिनामा जारी स्वास्थ्य विवरणअनुसार उनी अचाक्ली मोटा छन्। उनको तौल ११० किलो छ।
यस्ता लक्षण भएका व्यक्तिलाई कोभिड-१९ ले गम्भीर खतरा निम्त्याउन सक्ने हुँदा ट्रम्पको स्वास्थ्य उच्च जोखिममा रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
राष्ट्रपति निवास ह्वाइट हाउसका अधिकारीहरूले ट्रम्पमा सामान्य लक्षण मात्र देखिएको बताएका छन्। अर्थात्, उनलाई थोरै ज्वरो, थकान र रुघाखोकी मात्र देखिएको छ। यो बिसन्चो कुन हदसम्म बढ्न सक्छ भन्ने अहिल्यै निर्क्यौल गर्न सकिन्न।
‘उनी ७४ वर्षका छन्, मोटाघाटा छन् र पुरुष हुन्। यी तीनवटै कुरा उनलाई संक्रमणको उच्च जोखिममा राख्न पर्याप्त छन्,’ भ्यान्डरबिल्ट विश्वविद्यालयका संक्रामक रोगविज्ञ डा. विलियम स्क्याफ्नर भन्छन्, ‘राष्ट्रपति भएका कारण उनले राम्रै रेखदेख पाउनेछन् र सायद केही दिनमै स्वस्थ पनि भइहाल्लान्। तर, यो धोखेबाज भाइरसको केही भर छैन। सामान्य लक्षण देखिएको मान्छे पनि केही दिनमै खतरनाक अवस्थामा पुग्न सक्छ। त्यसैले उनलाई खतरामुक्त मान्न सकिन्न।’
अमेरिकामा उपलब्ध सर्वोत्कृष्ट औषधि उपचारको सुविधा ट्रम्पले प्राप्त गर्नेछन् भन्नेमा कुनै शंका छैन। शुक्रबार बेलुकी नै उनलाई मेरिल्यान्ड राज्यको बेथेस्डास्थित ‘वेल्टर रिड नेसनल मिलिटरी मेडिकल सेन्टर’ लगिएको थियो। उनको विस्तृत परीक्षण गरिने यो अस्पताल मुलुककै महत्वपूर्ण सैनिक अस्पताल हो।
ह्वाइट हाउसस्थित प्रेससचिव केइली मेकइनानीका अनुसार अबका केही दिन ट्रम्पलाई त्यही अस्पतालमा राखिनेछ।
राष्ट्रपतिका निजी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यविज्ञहरूको सल्लाहमा उनलाई उच्च सतर्कतासाथ त्यहाँ राख्न सिफारिस गरिएको हो। ट्रम्पले अस्पतालको ‘प्रेसिडेन्सियल सुइट’ बाटै आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिने जानकारी उनले दिइन्।
उनका चिकित्सकहरूले सतर्कतापूर्वक उपचार सुरू गरिसकेका छन्। शुक्रबारै उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई ‘एन्टिबडी कक्टेल’ को एक मात्रा दिएका थिए। यो एन्टिबडी अहिले परीक्षणकै क्रममा छ। तर अघिल्ला परिक्षणहरूमा यसले राम्रो परिणाम देखाएको थियो।
यसबाहेक भिटामिन डी, जिंक, मेलाटोनिन, फेमोटिडाइन र एस्पिरिन पनि दिइएको छ, जुन राष्ट्रपतिका निजी चिकित्सक डा. सिन पी कोनलीको सुझावमा आधारित थियो।
कोभिड-१९ ले मानिसपिच्छे फरक-फरक असर देखाउँदै आएको छ। त्यही भएर राष्ट्रपति ट्रम्पलाई पनि यतिसम्म असर पर्नेछ भनेर गणना गर्न सम्भव छैन। चिकित्सकहरूले बिरामीपिच्छे फरक अनुभव भोग्दै आएका छन्। कोही कोही लक्षणै नदेखाएर निको हुन्छन्। कसैको चाहिँ लक्षण देखिने मात्र नभई महिनौंसम्म बिरामी पर्छन्। कुनै कुनै बिरामीको अवस्था यतिसम्म भयावह भइदिन्छ, उनीहरू केही दिनभित्रै मृत्युको मुखमा पुग्छन्।
कतिपयमा भने गम्भीर स्वास्थ्य प्रभाव पनि पार्ने गरेको छ। यसले लामो समय उनीहरू काममा फर्कन सक्दैनन्।
कतिपय निको भइसकेका र लक्षणमुक्त देखिएकाहरूमा समेत उल्लेख्य मात्रामा मुटु सुन्निएको पाइएको छ। यसको कारण अहिलेसम्म वैज्ञानिकहरूले चाल पाउन नसकेको जानकारी गत महिना डा. एन्थोनी फाउचीले सांसदहरूलाई दिएका थिए। डा. फाउची संक्रामक रोगका मामलामा अमेरिकी सरकारकै उच्च विज्ञ हुन्।
‘यो रोगलाई कसैले पनि पूर्ण रूपमा बुझ्न सकेका छैनन्। त्यसैले विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत हुनुको विकल्प छैन,’ डा. फाउचीले भनेका थिए।
कोभिड-१९ का अन्य बिरामीजस्तै ट्रम्पको स्वास्थ्य पनि आगामी दिनमा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा धेरैथोकमा निर्भर रहन्छ।
‘सेन्टर्स फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन’ को तथ्यांकले देखाएअनुसार उनको उमेर समूहका ६४.७ प्रतिशत कोभिड बिरामीलाई अस्पताल भर्ना गर्नैपरेको थियो भने ३१.७ प्रतिशतको मृत्यु भएको थियो।
‘यहाँनिर कुनै एक बिरामीले के कस्तो अवस्था भोग्छन् भन्ने अन्दाजै लगाउन सकिँदैन भन्नु असाध्यै जरुरी छ,’ युनिभर्सिटी अफ मिनेसोटाको ‘सेन्टर फर इन्फेक्सियस डिजिज रिसर्च एन्ड पोलिसी’ विभागका निर्देशक एवं संक्रामक रोग विज्ञ माइकल टी ओस्टरहोम भन्छन्, ‘सामान्य हिसाबले कुरा गर्ने हो भने बूढापाकाहरूलाई ज्यानको जोखिम दुई गुणा बढी हुन्छ भनेर सहजै भन्न सकिन्छ। अझ मोटोपन पनि छ भने खतरा त झनै बढ्ने नै भयो।’
यति हुँदाहुँदै ट्रम्पकै उमेर र उस्तै जोखिमका धेरै मानिस पूरै निको भएका पनि पर्याप्त उदाहरण रहेको डा. ओस्टरहोम थप्छन्।
मास्क लगाउने मामलामा जहिल्यै आनाकानी गर्ने ट्रम्पको व्यवहारले उनको समस्यालाई जटिल मोड दिएको हुनसक्छ। मास्क नलगाएकै बेला भाइरस सरेको हो भने उनलाई असाध्यै धेरै परिमाणको भाइरसले संक्रमित पारेको हुनसक्छ। यसले उनलाई अन्य थुप्रै समस्याको खतरा थप्न सक्ने विज्ञहरूले उल्लेख गरेका छन्।
यी विज्ञहरू उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सक भने होइनन्। ट्रम्पजस्ता बिरामीको अवस्थालाई उनीहरूले सामान्य हिसाबले विश्लेषण मात्र गरेका हुन्।
‘उनलाई असाध्यै धेरै परिमाणको भाइरस संक्रमण भएको छ कि भनेर म अत्यन्तै भयभीत छु,’ युनिभर्सिटी अफ पिट्सबर्ग मेडिकल सेन्टरका डा. डेभिड ए नास भन्छन्, ‘यतिबेला उनलाई ठीकै देखिन्छ। तर, अहिले त भर्खरै सुरूआत भएकाले आगामी दुई सातासम्मै निगरानी गर्नु जरुरी छ।’
राष्ट्रपति ट्रम्पको वास्तविक अवस्था के कस्तो छ भन्ने कुरा रहस्यकै रूपमा रहिरहन सक्ने सम्भावना पनि प्रबल छ। उनले आफूभन्दा अघिल्ला राष्ट्रपतिझैं आफ्नो विस्तृत स्वास्थ्य अवस्था कहिल्यै खुलाउने गरेका थिएनन् र जहिल्यै आफू एकदमै ठीक अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्ने गरेका थिए। यही विषयलाई लिएर पछिल्ला वर्षहरूमा उनीमाथि धेरै प्रश्न उठेका थिए।
गत जुन महिनामा वेस्ट प्वाइन्टस्थित युएस मिलिटरी एकेडेमीमा सिँढी ओर्लँदै गर्दा र बोल्दाबोल्दै स्वर अड्किएर पानीको गिलास मुखमा लैजाँदै गर्दा अवरोध उत्पन्न भएको भिडिओ सार्वजनिक भएको थियो। त्यतिबेला पनि उनको स्वास्थ्यलाई लिएर थुप्रै आशंका उठेका थिए।
त्यस्तै, गत वर्ष नोभेम्बरमा ट्रम्पले बिना कुनै पूर्वजानकारी वाल्टर रिडको भ्रमण गरेका थिए, जसलाई ह्वाइट हाउसका अधिकारीहरूले पछि ‘नियमित र प्राथमिक उपचारका लागि हो’ भनेर जवाफ दिए। जबकि, त्यसको ठीक नौ महिनाअघि मात्र राष्ट्रपतिको शारीरिक अवस्थाको विस्तृत परीक्षण गरिएको थियो।
शुक्रबारै पनि सुरूमा त ह्वाइट हाउसका अधिकारीहरूले राष्ट्रपति निवासमै बसेर उनी संक्रमणबाट मुक्त हुने सुनाएका थिए। जबकि, साँझ पर्दा नपर्दै उनलाई अस्पतालै लग्नुपर्‍यो।
ट्रम्पको उपचार टोलीको नेतृत्व डा. कोनलीले गरिरहेका छन्। उनी जलसेनामा आबद्ध हुनुका साथै राष्ट्रपतिका निजी चिकित्सक पनि हुन्। विज्ञहरूको एउटा टोली पनि उनको उपचारमा खटिएको छ। डा. फाउचीले भने आफूलाई ट्रम्पको उपचारमा सरिक हुन कुनै खबर प्राप्त नभएको जनाएका थिए।
शुक्रबार ट्रम्पको परीक्षण उपचारपछि डा. कोनलीले आफ्नो विवरणमा ‘राष्ट्रपति ट्रम्पलाई बिना कुनै समस्या उपचार अघि बढाएको’ र ‘शरीरमा थकान देखिए पनि उनको अवस्था सामान्य रहेको’ उल्लेख गरेका थिए।
राष्ट्रपति ट्रम्पका मामिलामा एउटा सुखद पक्ष यो पनि छ, अहिलेसम्म कोभिड-१९ बेहोरेका धेरै बिरामीको उपचार गरिसकेका चिकित्सक यो रोग सुरू हुँदाको समयभन्दा धेरै अनुभवी भइसकेका छन्। महामारी सुरू हुँदाको बखत धेरै चिकित्सकले अन्दाजको भरमा उपचार गर्नुपरेको थियो। अहिलेको तुलनामा मृत्युदर पनि असाध्यै बढी थियो। अहिले कम्तीमा चिकित्सकहरूलाई कोभिड-१९ को उपचारमा ‘स्टेरोइड’ हरूको प्रयोग प्रभावकारी हुन्छ भन्ने थाहा भइसकेको छ।
कोभिड-१९ कै समाधानमा दुईवटा ‘थेराप्युटिक’ उपचारको अनुमति खाद्य तथा औषधि प्रशासनले दिइसकेको छ। एउटा त ‘रेमडेसिभिर’ औषधि हो, जुन नशाका माध्यमबाट दिइँदैछ भने अर्को ‘प्लाज्मा थेरापी’।
यो प्लाज्मा थेरापी एकपटक कोभिड-१९ लागेर निको भइसकेका बिरामीको रगतबाट निकालिन्छ, जसले रोग प्रतिरोधीको काम गर्छ। यी दुवै उपचार केवल अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीमाथि प्रयोग हुँदै आएको छ।
राष्ट्रपतिको उपचारमा एउटा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको उनको स्वासप्रश्वासमा अवरोध उत्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो। अवरोध उत्पन्न भए उनका चिकित्सकहरूले अस्पतालमै राख्ने निधो गर्न सक्नेछन् र अत्यन्त गम्भीरतासाथ उपचार अघि बढ्ने डा. अमेश अदल्जा बताउँछन्। उनी संक्रामक रोग विशेषज्ञ हुनुका साथै जोन होप्किंग्स सेन्टर फर हेल्थ सेक्युरिटीका वरिष्ठ विज्ञ पनि हुन्।
केही चिकित्सकले ‘मोनोक्लोनल एन्टिबडी’ प्रयोगको कोशिस पनि गर्न थालेको डा. अदल्जाले बताए। यो प्रयोगशालामा उत्पादित यस्तो अणु हो, जसले शरीरमा ‘एन्टी बडी’ को विकल्पका रूपमा काम गर्दै प्रतिरोधी प्रणाली सक्रिय पार्न सक्छ। तर, राष्ट्रपति ट्रम्पको जस्तो उमेरमा पुगेको मानिसका निम्ति यो उपचार व्यापक मात्रामा अपनाउन कठिन देखिन्छ।
हाल राष्ट्रपति ट्रम्पलाई दिइएको ‘एन्टिबडी कक्टेल’ को निर्माण ‘रिजेनेरोन’ नामको बायोटेक कम्पनीले गरेको हो। यसै साता समाचारमा आएअनुसार यो औषधिले ‘भाइरल लोड’ धेरै भएका बिरामीको शरीरबाट भाइरसको मात्रा घटाउन प्रभावकारी काम गरिरहेको छ।
त्यस्तै, कोभिड-१९ संक्रमित भएका र अस्पतालमा राख्नु नपरेका बिरामीको लक्षणलाई यसले कम पनि गर्दै आएको छ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज १८, २०७७, १२:२६:००
देउवादेखि ओलीसम्म मुछिएका भागबन्डाको विषयमा दलहरू किन मौन? के भन्छन् नेताहरू?
नेपाल प्रहरीमा ६ डिआइजी र १५ एसएसपीको दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा
किन आए ११ अफगान नागरिक काठमाडौं? कसरी पक्राउ परे?
चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले राणालाई भने - बहिर्गमन गर्ने आँट देखाउनुहोस्
एकाबिहानै गाडीमा गइरहेका ट्राफिकले सडकमा खाल्डो देखेपछि…
सर्वोच्च बारले भन्यो- प्रधानन्यायाधीश असफल हुनुभयो, मार्गप्रशस्त गर्नुहोस्
एक कप रगत!
कम्मरसम्म भिजाउने पानीमा हेलिँदै भारततिर (भिडिओ)
प्रधानमन्त्री र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबीच चुनाव केन्द्रित छलफल
बाढी-पहिरोबाट सदस्य गुमाएका परिवारलाई सुदूरपश्चिम सरकारले एक लाख दिने
रुपन्देही प्रहरीको आत्महत्या न्यूनीकरण कार्ययोजना
टिकटकमा भाइरल भएको 'चोकतिर केटा हो... चोकतिर' (भिडिओ)
एक कप रगत! दुर्गा कार्की
विकासका योजना कसरी बनाउने? पदम भण्डारी
असल छु भनेर पत्याउँदैन समाज! फर्सुराम पाण्डे
विदेशी पासपोर्ट र नेपाली राजनीति हेमन्त काफ्ले
समाजले खोजेको प्रगति भीमप्रसाद सापकोटा
विद्यार्थीलाई कसरी मार्गदर्शन गर्ने? हरिप्रसाद पोखरेल
पवनको बहकाउमा पारिजात झरिदियो सुदन लुइँटेल
पिपासुका चाल टंक सिटौला
शान्ति खोज्दै जाँदा... रामहरि अधिकारी